भीमदत्तनगर– प्रदेशस्तरको एउटा विश्वविद्यालयमा सात महिनादेखि तालाबन्दी यथावत् छ । यो यथार्थ कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हो ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र रजिष्ट्रारको निवासमा ताला लागेको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि ताला खुलाएर विश्वविद्यालयको कामकाज अगाडि बढाउने सुरसारसमेत देखिएको छैन । जिल्लास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र र स्थानीय प्रशासनसम्मको पहलले विश्वविद्यालयको तालाबन्दी नखुल्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी भने फुर्सदिला बनेका छन् ।
नौ वर्षअघि जन्मिँदै लामो हडताल र आन्दोलनबाट स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कलह अझै नसकिएको त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको दुखेसो छ । २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दै यहाँका विद्यार्थी, नागरिक समाज, प्राध्यापक र सर्वसाधारणले एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।
गत चैत अन्तिम साता विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार निलम्बन गरी नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएपछि नेपाल विद्यार्थी संघ कञ्चनपुरले तालाबन्दी थालेको हो । विद्यार्थीको आन्दोलनलाई विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले समेत सर्मथन जनाएका छन् ।
गत चैत २७ मा विश्वविद्यालयकै विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा संकायका डिन डा. गोविन्द विष्टलाई रजिष्ट्रारको दिइएको छ । श्रेष्ठ र भट्टले आर्थिक अनियमितता गरेको विषय आएपछि सरकारले तीनवटा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो ।
सोही छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयका कुलपतिले जिम्मेवारीबाट हटाउँदै नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति : असोज २८, २०७६ मंगलबार १४:५३:२०,